यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कर्मकाण्डी हो : राजेन्द्र महतो – AayoMail
आयाेमेल संवाददाता २०७९ जेठ १३ गते १६:४१
काठमाडौं – लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कर्मकाण्डी भएको बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथिको जारी छलफलमा बोल्दै उनले संसदमा यसबारेको बहस बकवास भएको बताए।
‘यो बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाणडी छ। यस्ता कर्मकाण्डी बजेट ल्याएर कहिलेसम्म जनतालाई झुक्याउने हो? यसमा समीक्षा हुनुपर्छ’, उनले भने। महतोले जति राम्रा नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि देश समृद्धि नहुने कुराको समीक्षा हुनुपर्ने बताए।
महतोले संसदमा राष्ट्रपतिले २-२ घण्टा र प्रतिपक्षी दलका अध्यक्षले ३-३ घण्टा घाँटी सुकाइसुकाइ बोल्नुको केही अर्थ नभएको बताए। संसदमा चलिरहेको यो वहसमा कुनै पनि जनताको ध्यान नगएको उल्लेख गरे। उनले प्रकृतिले समृद्धिको वरदान दिए पनि किन अहिलेसम्म देश समृद्ध नभएको भन्ने विषयमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने बताए।
उनले एकअर्कालाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएको भने, ‘उसले उसलाई भ्रषटाचारी भनेको छ उसले अर्कोलाई। ठोकुवाका साथ भनेपछि होला नि त दुवै भ्रष्टाचारी, खोइ कारबाही गरेको?’
‘राजनीति कुर्सीको लागि गर्ने? राजनीति त जनताका लागि गर्ने हो। तर, कुर्सीका लागि, पदका लागि गर्ने। मैले कुनै एक नेता वा दललाई भनेको होइन यसमा हामी सबै जिम्मेवार छौं, त्यसैले यसमा छलफल गरौं’, उनले भने।